Henkel/Loctite ဖြန့်ဖြူး | Henkel/Loctite အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး - Infinite-Electronic.hk
- Henkel ကော်အီလက်ထရောနစ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ္စည်းများဆန်းသစ်တီထွင်မှု Henkel ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, စက်မှု, စားသုံးသူ, လက်ကိုင်, ဝတ်စရာ, display နှင့်ထွန်းသစ်စအီလက်ထရွန်းနစ်စျေးကွက်ကဏ္ဍများတွင် applications များအမျိုးမျိုးအဘို့မျိုးဆက်သစ်ပစ္စည်းများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
LOCTITE ၏ Henkel ရဲ့ဦးဆောင်အီလက်ထရွန်းနစ်အမှတ်တံဆိပ်, multicore (ယခု LOCTITE အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ရောင်းချခဲ့) နှင့် Bergquist ရှည်လျားပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်စည်းဝေးပွဲကို application များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ မျက်နှာပြင်အပါအဝင်ပစ္စည်းများကိုတစ်ကျယ်ပြန့်အစုစုနှင့်အတူကော်, အဆင့်မြင့် flux ဓာတုဗေဒ, encapsulation တွေကိုသေချာမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဂဟေဆက်ဖြေရှင်းနည်းများ, ကူးမှုကော်, အပူစီမံခန့်ခွဲမှုပစ္စည်းများအဖြစ် CSP underfills နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းများ mount, Henkel ရဲ့အဆင့်မြင့်ဖော်မြူလာအများဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော In-လယ်ပြင်စွမ်းဆောင်မှုသေချာ ။
LOCTITE - အ LOCTITE အမှတ်တံဆိပ်အရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ကဏ္ဍအတွင်းမှာပဲ LOCTITE မှင်, potting, display ကိုကော်, အခြေခံအဆောက်အကော်နှင့်ကိုက်ညီအပေါ်ယံပိုင်းထုတ်ကုန်လိုင်းများပုံနှိပ်ဝန်ကြီးချုပ် Henkel ရဲ့ဂဟေဆက်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်, flux, underfill, မျက်နှာပြင်ကော် mount ဖြစ်ပါသည်။
Bergquist - အခုတော့ Henkel ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, အပူစီမံခန့်ခွဲမှုပစ္စည်းများ၏ Bergquist လိုင်းစိန်ခေါ်မှု applications များအမျိုးမျိုးအဘို့အသာလွန်အပူထိန်းချုပ်မှုကယ်တင်တတ်၏။ Gap Pad®, Gap Filler, Thermal Clad®, SIL-Pad®များ၏ကောင်းမွန်စွာလေးစားအမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်မသိ, Liqui-Form®andဘွန်း-Ply®, Henkel ရဲ့ပြည့်စုံသောအပူပစ္စည်းများအစုစုအတွက်အလွှာအဆင့်အထိထံမှထိရောက်သောအပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို enable ပြုလုပ်ဖြေရှင်းချက်လွှမ်းခြုံ နောက်ဆုံးပရိသတ်တို့အား ဖြတ်. ။
multicore - ယခင် multicore နှင့်ယခု LOCTITE အဖြစ်စျေးကွက်, LOCTITE ဂဟေဆက်ထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လေးစားဖွယ် Interconnection ပစ္စည်းများအကြားရှိပါတယ်။ ဂဟေဆက်ရေးဆွဲရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆယ်စုနှစ်များစွာ, ဟေလိုဂျင်-အခမဲ့, High-ယုံကြည်စိတ်ချရဂဟေဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များ LOCTITE ဂဟေဆက်ပစ္စည်းများမြောက်မြားစွာစက်မှုလုပ်ငန်းဆုရရှိခဲ့ကြပြီးဦးဆောင်လမ်းပြ-အခမဲ့ဖို့အီလက်ထရွန်နစ်စျေးကွက်ရဲ့အပြောင်းအရွေ့ enabled ပါပြီ။ အပူချိန်-တည်ငြိမ် LOCTITE GC 10 နှင့် LOCTITE GC 3W ဂဟေဆက်အတိတ်နဲ့တူဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖော်မြူလာ, ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချအထွက်နှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးပိုတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပရိသဖြစ်စဉ်များသည်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဂဟေဆက်ထုတ်ကုန်များ LOCTITE လိုင်းအဆင့်မြင့် flux ဖော်မြူလာ, ခဲ, ခဲ-အခမဲ့ဟေလိုဂျင်-အခမဲ့ဂဟေဆက်အတိတ်, High-ယုံကြည်စိတ်ချရသတ္တုစပ်, ဂဟေဆက်ဘား, preforms နှင့် core နဲ့အစိုင်အခဲဝါယာကြိုးများပါဝင်သည်။
ဖေါ်ပြချက်: SILICONE GREASE TG100
ဖေါ်ပြချက်: 97SC 400 2% .022DIA 23AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1962 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 3873 SELF SHIM HI COND THERM ADH
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2125 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC 400 2% 0.38 DIA
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1975 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 400 2% .024DIA 22AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2086 pcs
ဖေါ်ပြချက်: MFR301 FLUX PENS (RMA) 10ML
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5257 pcs
ဖေါ်ပြချက်: HMP 366 3% .028DIA 21AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2104 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 400 1% .032DIA 20AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2382 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 60/40 370 3% .024DIA 22AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2294 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC C511 2% .032DIA 20AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1250 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 400 2% .015DIA 27AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4010 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER MASK MSC 1000S 250 ML
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3075 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 370 3% .032DIA 20AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2389 pcs
ဖေါ်ပြချက်: HIGH TEMP 15"L 120LB BLUE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 29113 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SI 5140 METHOXY 85 GR TB/BN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2775 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 HYDRO-X 2% .022DIA 23AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3998 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 HYDRO-X 2% .032DIA 20AWG
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 CRYSL 502 3% .032DIA 20AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2596 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC 400 2% .064DIA 14AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1035 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC C511 2% .022DIA 22AWG 24SWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1776 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC 400 2% .032DIA 20AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1094 pcs
ဖေါ်ပြချက်: LOCTITE GC 3W SAC305T3 895V 53U
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 656 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 60/40 370 3% .032DIA 20AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2407 pcs
ဖေါ်ပြချက်: COMPRESSION TIE 8"L 60LB BLACK
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 216566 pcs
ဖေါ်ပြချက်: MP200 RWF SOLDER FLUX NO CLEAN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2918 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 CRYSL 502 2% .022DIA 23AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2034 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SN62 370 3% .024DIA 22AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1873 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 CRYSL 502 3% .064DIA 14AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2894 pcs
ဖေါ်ပြချက်: HMP 366 3% .022DIA. 23AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3857 pcs
ဖေါ်ပြချက်: LOCTITE NC RTV SIL CL 300ML
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2761 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC 400 2% .048DIA 16AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1259 pcs
ဖေါ်ပြချက်: HMP 366 3% .050DIA 16AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2819 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC C511 2% .015DIA 27AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1982 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 400 2% .048DIA 16AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2509 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 CRYSL 502 2% .032DIA 20AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2293 pcs
ဖေါ်ပြချက်: LOCTITE GC 10 SAC305T4 885 53U
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 759 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SOLDER TIP TINNER (ACTIVATOR)1PC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6877 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 60/40 370 3% .015DIA 27AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3398 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 CRYSL 502 3% .015DIA 27AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3631 pcs
ဖေါ်ပြချက်: LOCTITE NC RTV SIL CL 80ML
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7589 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 60/40 370 3% .064DIA. 14AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2953 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 400 2% .022DIA 23AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2428 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SI 5140 METHOXY 300ML CQ/BN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1408 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 63/37 400 1% .064DIA 14AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2717 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC HYDRO-X 2% .064DIA 14AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1065 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 97SC C511 2% .064DIA 14AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1342 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SI 5145 RTV SILICONE 300ML CQ/BN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 809 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CAT6SHLD PATCH CORD 5' GR
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6645 pcs